GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in saaka inta badan uu xiran yahay suuqa Boosaaso, kadib markii ganacsatada lagu soo rogay cashuur dheeraad ah.
Saddex cisho ka hor ayaa ganacsatada wax kasoo dajisa dekadda Boosaaso waxa ay sheegeen in ganacsigooda ay Wasaaradda Maaliyaddu ku kordhisay cashuurtii ay ka qaadi jiraty isla markaasna taasi ay ganacsigooda culays ku noqotay.
Ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen inay diideen bixinta lacagtaasi cashuurta ah ee lagu kodhiyey isla markaasna ay ka door bideen inay shaqa joojin sameeyaan.
Qaar kamid ah dadka dan yarta ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayuu saameyn ku yeeshay xirnaanshaha ku yimid goobaha ganacsiga Boosaaso, waxaana talaabadan weli ka jawaabin Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Dhawaan ayaa waxaa ahaqa joojin sameeyey ganacsatada waqooyiga magaalada Gaalkacyo, kadib markii ay sheegeen in Wasaaradda Maaliyadda Puntland ay kusoo rogtay cashuur dheeraad ah.